फेसबुकका भित्तामा ‘एउटा साथी’ ! « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
फेसबुकका भित्तामा ‘एउटा साथी’ !
Published On : June 27, 2014
सञ्चारकर्मी लक्ष्मण सुवेदीको डेब्यु निर्देशन रहेको चलचित्र ‘एउटा साथी अहिले सामाजिक सञ्जालहरुमा चर्चामा छ । सामाजिक सञ्जालबाट नै दशैंको फुलपातीको दिनलाई चलचित्र प्रदर्शनको मिती सार्वजनिक गरेका निर्देशक सुवेदीले प्रचारप्रसार सँगै चलचित्रको प्रदर्शनको मिती सवैलाई जानकारी होओस् भन्ने उद्देश्यले ‘फेसबुक क्याम्पियन’ आगाडी बढाएको जानकारी दिए । यो मितीमा नै नायिका रेखा थापाको चलचित्र ‘हिम्मतवाली’ पनि दर्शकमाझ आउने यसअघी नै घोषणा भईसकेको छ ।
गणेश कुमार श्रेष्ठले खिचेको यो चलचित्र अहिले पोष्ट प्रोडक्शनमा छ । रोमान्टिक प्रेम कथामा आधारित यो चलचित्रमा सलोन बस्नेत, रिस्ता बस्नेत, जोन तामाङ् र शिशिर भण्डारी मुख्य भुमिकामा छन् भने चलचित्रमा नायिका अनु शाह सँगै निर्देशकद्वय सोभित बस्नेत र नारायण पुरीको पनि पनि विशेष अभिनय रहेको छ ।
विगत १३ वर्ष देखी सक्रिय रंग पत्रकारिता गर्दै आएका सुवेदीले यो बीचमा बटुलेको चलचित्र क्षेत्रको सबै अनुभवलाई अब भने एक निर्देशकको माध्यमबाट ‘एउटा साथी’मा खर्चिएको लागेको बताए । निर्देशक सुवेदीले भने, ‘चलचित्रले पूर्ण रुपमा मनोरञ्जन पस्कनेछ’ । ‘एउटा साथी’को कथा सुशिल पंगेनीले लेखेका हुन् । चलचित्रमा द्धन्द्ध निर्देशन राजेन्द्र खड्गीको रहेको छ ।